DF, Masar iyo USA oo la ogaaday inay wax ka wadeyn heshiiskii Berbera - Caasimada Online
Home Warar DF, Masar iyo USA oo la ogaaday inay wax ka wadeyn heshiiskii...
DF, Masar iyo USA oo la ogaaday inay wax ka wadeyn heshiiskii Berbera
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maalmihii ugu dambeeyey la hadal hayey heshiiska lagu tilmaamay inuu halis ku noqon doono Soomaaliya ee loo saxiixay dowladda Imaaraadka Carabta si ay Saldhig Militari oo laga duqeeyo Xuutiyiinta uga sameysato Magaalada Berbera.
Haddaba waxaa horey idinkugu soo gudbinay inuu arrintaan wax badan ka ogow lacag laaluush ahna ku qaatay Ra’isulwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, haddaba waxaa haddana soo baxdo in dowladdii soomaaliya ee hore ay raali ka aheyd arrintaan sidoo kale ay dowladda Mareekanka wax ka ogeyd.
Maxamed Bin Za’id Al-nahyaan oo ah dhaxal-sugaha Abuu-Dhabi ahna ku-xigeenka taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Imaaraadka ayaa ka dhawaajiyey inay arrintaas kala tashteyn dowlada Soomaaliya, Masar iyo Mareekanka.
Imaaraadka ayaa ka dhawaajisay inay wadahadal ku aadan heshiiska Berbera la gashay dowladdii uu hoggaaminayey Xasan Shiikh Maxamuud, Masar iyo Mareekan si ay Berbera saldhig Militari uga dhigato.
Warbixintaan ayaa waxaa saakay qoray wargeyska caanka ah ee Al-Wadan ee kasoo baxa dalka Masar , wuxuuna sheegay in la filayaa sida in ay wax badan ku soo kordhiso isku socodka ganacsiga caalamiga iyo in sidoo kale fulinta mashruucan in uu xoojiyo ammaanka marinka Baab-Al-mandab oo weliba si fudud halkaasi looga sameeyo saldhigyo militari.
Imaaraadka ayaa dhawan heshiiskaas la saxiixay Maamulka Somaliland, waxaana heshiiskaas ansixiyey Baarlaaanka Somaliland kadib markii ay isugu imaadeyn kulan gacanta la isugula tagay.
Waxaa dhawaan lasoo saaray warbixin muujineysay in Axmed Siilaanyo iyo Xisbigiisa ay qaateen lacag gaareyso ilaa 50 Malyan oo Dollar si ay heshiiskaas u fududeeyaan, halka Ra’isulwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu isna qaatay ilaa 35 Malyan oo Dollar.